घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू Emiliano Martinez बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो Emiliano मार्टिनेज जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन (पत्नी), बच्चाहरु, नेट मूल्य र जीवनशैली को बारे मा जानकारी प्रदान गर्दछ। यहाँ, हामी गोलकीपरको जीवन कहानी उसको शुरुको बर्षदेखि शुरु भयो जबदेखि उनी धेरै धनी र लोकप्रिय भए।
Emiliano मार्टिनेज जीवन कहानी।
हो, सबैजना उसको प्रभावशाली बल नियन्त्रण र शान्त व्यक्तित्वक ​​आचरणको बारे सचेत छन्। यद्यपि धेरैले Em Emilo Martinez को जीवनी पढेका छैनन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Emiliano Martinez बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, शट-स्टापरको उपनाम "मार्टिनिन्हो" हो। Damián Emiliano Martínez Romero अर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्स प्रान्तको मार डेल प्लाटा शहरमा सेप्टेम्बर २2२ 1992 मा उनकी आमा सुजाना र उनका बुबा अल्बर्टोमा जन्म भएको थियो।
यदि तपाईं उनलाई भेट्नुभएन भने, यहाँ इमिलियानो मार्टिनेजका आमा-बुबामध्ये एक हुनुहुन्छ - उहाँसँग बच्चाको सुन्दर आमाबाहेक अरू कोही थिएन।
आफ्नो आमासँग इमिलियानो मार्टिनेजको बचपनको फोटो।
Emiliano मार्टिनेज परिवार उत्पत्ति:
शट-स्टापर अर्जेन्टिनाको बोनफाइड नागरिक हो। मार्टिनेजको पारिवारिक उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानको नतिजाले ऊ मुख्यतया सेतो जातीको हो भनेर स .्केत गर्छ। अर्जेन्टिनाको पूर्वी क्षेत्रमा जातीय समूहले प्रभुत्व जमायो।
उनी अर्जेन्टिनाको त्यस्तो क्षेत्रका हुन् जहाँ सेता जातीयता प्रबल छ।
इमिलियानो मार्टिनेज बढ्दो वर्ष:
मार्टिनहिनो, जसलाई उनको उपनाम छ, उनको भाई शहर डेला प्लाटामा एक भाइ अलेजान्ड्रोसँगै हुर्केका थिए? गोलकीपरसँग उसको बाल्यकालको सम्झनाहरू शान्त हुँदैनन् किन कि उहाँ अभावमा हुर्कनुभयो। तर तपाईं उसलाई हाँस्दा पक्रन सक्नुहुन्छ जब पनि ऊ कसरी कलिलो उमेरमा फुटबल खेल्न थाल्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दछ।
युवा एमिलियानो मार्टिनेजको बुबा र ठूला भाइको साथ थ्रोब्याक फोटो।
Emiliano मार्टिनेज परिवार पृष्ठभूमि:
गोलकी गरीब परिवारबाट आउँदछ। त्यस्तै उसको परिवारले आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलो कष्ट सहनु पर्छ। उसले बिल तिर्न असमर्थ भएकोमा राती अबेर उसको बुबा रोएको देखेको छ। युवा गोलकीपरले हेर्नको लागि त्यो राम्रो दृश्य थिएन र त्यस रातको सम्झनाहरू बिर्सनु गाह्रो छ।
एमिलियानो मार्टिनेजका लागि कसरी क्यारियर फुटबल शुरू भयो:
अनावश्यक रूपमा भन्नुपर्दैन, जब उसले CA स्वतन्त्रतामा उद्देश्यपूर्ण क्यारियर निर्माण शुरू गर्‍यो, तब उक्त युवाले आफ्नो परिवारको आर्थिक आशा बोकेका थिए। यो क्लबमा उनले आफूसँग भविष्यका लागि सपना देख्ने आँट गरे जुन फुटबलमा आफूसँग भएका सबै राम्रा चीजहरू थिए।
उनले (दायाँ) आफ्नो भाइसँग कलिलो उमेरमै फुटबलमा प्रशिक्षण सुरु गरे।
क्यारियर फुटबल मा Emiliano मार्टिनेजको शुरुआती वर्ष:
जब फुटबल फुटबल १ 16 वर्षको थियो, उसको करियर पहिले नै सही दिशातर्फ गइरहेको थियो। वास्तवमा, उसले अर्जेन्टिना अन्डर १s को लागि खेल सुरु गरिसकेको थियो र आर्सेनलको स्काउटले उनलाई देख्यो।
मार्टिनेजलाई लन्डन क्लब ट्रायलको लागि पठाइएको थियो र उसले राम्रो प्रभाव पारेको थियो। गनर्सले उनलाई १.१ मिलियन डलरमा साइन अप गर्न समय खेर फाल्यो र क्लब एटलेटिको इण्डिपेन्डिएन्ट त्यो रकमको लागि प्रतिभाशाली युवासँग भाग लिन खुसी थिए।
इमिलियानो मार्टिनेज बायोग्राफी - कहानी ख्याति कथा:
तत्कालीन युवालाई आफ्नो नयाँ क्लबमा बसोबास गर्न गाह्रो थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने ऊ डराएको किशोर थियो र अ English्ग्रेजीको एक शब्द पनि उसलाई थाँहा थिएन। उहाँसँग धेरै टाढाको परिवारको साथ, उसले क्लबमा चुनौतीपूर्ण पहिलो वर्ष पार गर्नुपर्‍यो। मार्टिनेजलाई १ professional वर्ष नपुग्दासम्म कुनै प्रोफेशनल खेल खेल्न अनुमति थिएन, युरोपियन राहदानी नभएकोमा धन्यवाद। नतिजा स्वरूप, ऊ सट्टामा केवल मित्रता खेल्न बाध्य भयो।
जब मार्टिनेजले अन्ततः वरिष्ठ अंग्रेजी फुटबलको स्वाद पाए, यो ओक्सफोर्ड युनाइटेडसँग थियो जहाँ उनलाई 2012णमा २०१२ मा पठाइएको थियो। उनले त्यही वर्ष कभेन्ट्री सिटीको साथ लिग कपमा आर्सेनलको लागि शुरुवात गरे। त्यस पछि, मार्टिनेजको क्यारियर घर को बारे मा लेख्न केहि केहि थिएन। उनले इ England्ल्याण्डका विभिन्न क्लबहरूमा loanणमा वर्षौं बिताए। तिनीहरूले शेफिल्ड बुधवार, रदरहैम युनाइटेड, वोल्भरहेम्प्टन वान्डरर्स, गेटाफ र रिडि include समावेश गर्दछ।
इमिलियानो मार्टिनेज फेम बायोमा उठे:
"मार्टिनहिनो" कहिल्यै सुरु लाइन मा पदोन्नती प्राप्त र उनले एक ब्याकअप गोलकी हुनु को क्रॉस सहन थियो। यो पहिलो-विकल्प कीपर नभएसम्म थिएन बर्नेड लेनो जुन २०२० मा एक गम्भीर चोटपटक लाग्यो कि अन्तमा मार्टिनेजले उचित अवसर पाए। आजीवन मार्टिनेजले बाँकी मौसमको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रस्तुत गर्ने मौका गुमाउने कोही पनि छैन।
आफ्नो प्रभावशाली जादू को चरम मा, उनले महत्त्वपूर्ण बचाउहरू गरे जसले आर्सेनललाई उनीहरूको १ 14 औं एफए कप जित्न मद्दत गर्‍यो। मार्टिनेजले आफूलाई आफूलाई गनर्सको लागि एक भरपर्दो स्टार्टरको रूपमा योग्य प्रमाणित गरिसकेको छ र उसले पाएको सबै प्लेटाइम माग गर्ने अधिकार छ। ऊ आफ्नो स्थान प्रतिस्पर्धा गर्न जान सक्दछ जब पहिलो छनौट कीपर स्वस्थ हुन्छ। जुनसुकै तरिकाले चीजहरू उसको लागि काम गर्छन्, बाँकी, जस्तो उनीहरू भन्छन्, सधैं इतिहास हुनेछ।
दृढता वास्तवमा सद्गुण हो - IG
एमिलियानो मार्टिनेज पत्नी को हो?
गोलकीपरको प्रेम जीवनमा बढ्दै, धेरैलाई थाहा छैन कि उनी मन्डिन्हा मार्टिनेजसँग वैवाहिक सम्बन्धमा छन्। Lovebirds कहिले भेटे र डेटि began गर्न थालेको बारेमा धेरै थाहा छैन तर हामीलाई थाहा छ कि उनीहरू २०१ 2016 मा पति र पत्नी बने।
इमिलियानो मार्टिनेजका बच्चाहरू को हुन्?
इमिलियानो मार्टिनेजकी पत्नी - मन्डिन्हा मिसु सुन्नोस किड्समा मुख्य कार्यकारी अधिकृत हुन्, बच्चाको आन्तरिक विशेषज्ञहरू। उनी मार्टिनेजका दुई बच्चाहरूको पनि आमा छिन्। तिनीहरूमा एक छोरा - सान्ती इमिलियानो मार्टिनेज (सन् २०१ 2018 मा जन्म) र अर्को बच्चा अप्रिल २०२० मा जन्मिएको छ।
एमिलियानो मार्टिनेज आफ्नी पत्नी मन्डिन्हासँग।
Emiliano मार्टिनेज पारिवारिक जीवन:
यो एक निर्विवाद तथ्य हो कि परिवार फुटबलको अगाडि र गोलको लागि पछि आउँछ। हाम्रो रुचि प्रोफाइलको लागि केस कुनै फरक छैन। हामी तपाईलाई इमिलियानो मार्टिनेजका आमा बुबा, भाइबहिनी र आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू लिएर आउँछौं।
Emiliano Martinez अभिभावकको बारेमा:
सुसाना र अल्बर्टो क्रमशः गोलकी आमा र बुबा हुन्। तिनीहरू दुबै अर्जेन्टिनी हुन् र अभाव र प्रशस्ततामा एक अर्का पक्षका साथ उभिएका छन्। सबैभन्दा बढि, इमिलियानो मार्टिनेजका अभिभावकहरू उनको क्यारियरको सहयोगी छन् र उनको सफलताको लागि बलिदानको लागि जे पनि गर्न सक्छन्।
उनको बुबासँग इमिलियानो मार्टिनेजको दुर्लभ फोटो।
मार्टिनेज एक चोटि सम्झन्छिन् कि उसको आमा भोकाएको थियो भनेर निश्चित गर्न कि ऊ र उसको भाइले त्यस दिन केही खाएको थियो। त्यसकारण यो अचम्मको कुरा होइन कि गोलकीपर आफ्नो परिवारको साथ हृदयमा खेल्छ र उनीहरूसँग आफ्नो जीतको समाचार साझा गर्न हिचकिचाउँदैन।
एमिलियानो मार्टिनेज भाई बहिनीहरूको बारेमा:
गोलकी एक सानो ज्ञात भाई अलेजान्ड्रोको साथ हुर्कियो। उनले सायद उसै भाइबहिनीको बारेमा बोल्छन् जो हामी उनको ठूलो प्रशंसक हुन विश्वास गर्दछौं। अलेजेन्ड्रो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा हेराईले कार र रेसि inमा उसको चासो भएको कुरा प्रकट गर्दछ।
एमिलियानो मार्टिनेज आफ्नो भाइ अलेजान्ड्रोसँग रमाईलो गर्दै।
एमिलियानो मार्टिनेजका आफन्तहरूका बारे:
गोलकीको नजिकको परिवारबाट टाढा, उसको पुर्खाको विवरणहरू अज्ञात छ विशेष गरी यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, मार्टिनेज काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजीहरूबारे धेरै थाहा छैन।
Emiliano मार्टिनेज व्यक्तिगत जीवन:
फुटबलको संसार बाहिर को हुनुहुन्छ “मार्टिनिनहो”? उसको अफ पिच पात्रको प्रकृति कस्तो छ? के उनीसँग जीवनसंगै बाहिर छ स्टिक्सहरू बीचमा उभिएर र प्रभावकारी बचतहरू तान्न? मार्टिनेज व्यक्तित्वको साथ सुरु गर्न, उहाँ शान्त, रमाइलो प्रेम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जो भावनात्मक रूपमा बौद्धिक र व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्यहरू खुलाउन खुला छ।
अरु के छ त? ऊसँग जीवनको प्रति आशावादी असर छ र आफ्नो समय कति राम्रोसँग बिडिंग गर्न जान्छ धेरै जसो भर्जिन राशि चक्र साइन अन्तर्गत जन्मेका व्यक्तिहरु जस्तै। परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने सहयोगी मार्टिनेजले चलचित्रहरू हेर्न, यात्रा गर्ने, रेसि games खेलहरू जारी राख्ने, टेबल टेनिस खेल्ने अन्य रुचिहरू र रुचिहरूमा मन पराउँछन्।
टेनिस खेल्नु उसको एक सोख हो।
Emiliano मार्टिनेजको जीवनशैली:
कसरी गोलकीजी बनाउँदछ र आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ। गोलकीजीसँग एन्डोरसमेन्टबाट प्रवाह हुने आम्दानीको स्थिर स्ट्रिम पनि हुन्छ। यस्तै, उनलाई लन्डनको अपार्टमेन्टको ग्यारेजमा उनले महँगो कर्वेट र मर्सेडेज पार्क गरेको देख्नु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन।
मानव र घरपालुवा जनावर बिर्सनुहोस्। त्यो कार भाग्य लायक छ।
Emiliano मार्टिनेज नेट मूल्य:
के तपाईंलाई थाहा छ जून २०२० सम्म उसको कुल सम्पत्ति १. Eur मिलियन यूरो छ? यो खुल्ला गोप्य कुरा हो कि उनले फुटबल खेल्नको लागि प्राप्त गरेको तलब र ज्यालाबाट उनले धेरै सम्पत्ति कमाए।
Emiliano Martinez तथ्यहरु:
हाम्रो गोलकीको बायो लपेट्नका लागि, अर्जेन्टिना गोलकीपरको बारेमा थोरै मात्र ज्ञात वा अनकही सत्य छन्।
तथ्य # १ - आफ्नो आय आम मानिससँग तुलना गर्दै:
अर्जेन्टिनी पेसो ($) मा कमाई
प्रति वर्ष £ 1,040,000 € 1,154,140 $ 1,361,308 $ 100,175,184
प्रति महिना £ 86,666 € 96,178 $ 113,442 $ 8,347,932
प्रति हप्ता £ 20,000 € 22,195 $ 26,179 $ 1,923,486
प्रति दिन £ 2,849 € 3,162 $ 3,729 $ 274,784
प्रति घण्टा £ 118 € 131 $ 155 $ 11,499
प्रति मिनेट £ 1.98 € 2.20 $ 2.60 $ 190.8
प्रति सेकेन्ड £ 0.03 € 0.04 $ 0.05 $ 3.2
अर्जेन्टिनामा एक औसत व्यक्ति १००,१10,,१5 अर्जेन्टिना पेसो बनाउन कम्तिमा १० बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ। यो Emiliano को आर्सेनल (२०२० तथ्या .्क) मा वार्षिक तलब बराबर छ।
तथ्य #2- पालतू जनावरहरू:
मार्टिनेज घरपालुवा जनावरहरुमा विशेष गरी कुकुरहरु मा ठूलो छ। उसले आफ्नो हरित बगैचामा कुकुरको साथ तालिम लिन्छ र जनावरहरूका साथ इन्स्टाग्राम योग्य फोटोहरू लिन्छ। ती मध्ये एक फोटोले कुकुरलाई दाग लगाएको स्पटहरू देखायो।
उसको कुकुरको साथ गोलकीपर हेर्नुहोस्।
मार्टिनेजको सम्भावित of 75 बाट overall 78 अ XNUMX्कको समग्र फिफा रेटिंग छ। यो गोल्यकीले सँगी भाई र देशवासी जस्ता प्लेटाइमको अभावमा ग्रस्त भएको बुझिन्छ। सर्जियो रोमोरो.
उसको भर्खरको सफलता र स्थिरताको लागि संभावनाहरु संग, प्रशंसकहरु लाई कुनै चिन्ता छैन कि उनको रेटिंग्स को समय मा सुधार हुनेछ।
त्यहाँ सँधै नम्र शुरुआत हुन्छ र हामी यस गोलकीपरको लागि बढि आशा गर्न सक्छौं।
के तपाईंलाई थाहा छ कि गोलीले आफ्नो जन्म वर्ष -१ 1992 XNUMX non असंख्य गैर खेल खेलाउने व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्दछ? तिनीहरूमा सेलेना गोमेज, कार्डि बी, माइली साइरस र डेमी लोभाटो छन्। त्यो वर्ष, ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक बार्सिलोना स्पेनमा आयोजित गरिएको थियो भने शीतकालीन ओलम्पिक फ्रान्सको अल्बर्टभिलमा आयोजना गरिएको थियो।
तथ्य #5- धर्म:
इमिलियानो मार्टिनेज अझै आफूलाई एक विशेष धर्मसँग सम्बद्ध गर्न सकेका छैनन्। जस्तो कि, उहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा निश्चित रूपमा भन्न सकिदैन। तर असमानताहरू यस तथ्यको पक्षमा छन् कि एमिलियानो मार्टिनेजका आमा-बुबाले सम्भवतः उनलाई एक इसाई हुर्काएका थिए।
पुरा नाम Damián Emiliano Martínez Romero
जन्म मिति सेप्टेम्बर १21992 २ को दोस्रो दिन
जन्मस्थान अर्जेन्टिनाको ब्यूनस आयर्स प्रान्त
खेल्ने स्थिति गोलकीपर
आमाबाबुले अल्बर्टो (बुबा) सुसाना (आमा)।
सिबलिंग अलेजेन्ड्रो (भाई)।
पत्नी मन्डिन्हा मार्टिनेज
बच्चाहरु सान्ती एमिलियानो मार्टिनेज र एक अन्य।
नेट मूल्य १. 1.5 मिलियन यूरो
सोख चलचित्रहरू हेर्दै, यात्रा गर्दै, रेसि games गेमहरू जारी राख्दै, टेबल टेनिस खेल्दै।
अर्जेन्टिना गोलकीपरको जीवन यात्राको बारेमा यो आकर्षक लेख पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी विश्वास गर्छौं इमिलियानो मार्टिनेजको बाल्यकालको कथाले तपाईलाई विश्वास दिलाउँदछ कि धैर्य र दृढताले सबैलाई जित्दछ।
Lifebogger मा हामी निष्पक्षता र सत्यताका साथ बायोग्राफीहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं Emiliano मा यो लेख मा केहि अप्ठ्यारो मा आयो, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल टिप्पणी दिनुहोस्।